‘झोला’ मा विदेशी कलेज, मन्त्रालयकै संरक्षणमा करोडौं ठगी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
‘झोला’ मा विदेशी कलेज, मन्त्रालयकै संरक्षणमा करोडौं ठगी
विश्वविद्यालयको नाम र स्थान परिवर्तन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अनुमति दिएका थिए, जबकि धरानमा कलेज सञ्चालन गर्न जग्गा नै थिएन
आश्विन १०, २०७८ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा खुलेका कलेजको सेयर दिने प्रलोभनमा करोडौं ठगी भइरहेको खुलेको छ । मापदण्डबिनै यस्ता कलेजको सम्बन्धन, ठाउँसारी, नामसारीमा राजनीतिक पहुँच देखिन्छ भने शिक्षामन्त्रीदेखि मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत मुछिने गरेका छन् ।
यस्तै ठगी गर्नेमध्येका एक हुन्, केन्ट कलेज अफ टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष सञ्जयकुमार झा । उनले एकभन्दा बढी कलेज दर्ता गर्ने र ती कलेजमा सेयर दिने भन्दै करोडौं ठगी गरेको पीडितहरूले बताएका छन् । झाले शिक्षा मन्त्रालयबाटै फर्जी कागजात बनाई अन्य सेयर सदस्यलाई झुक्याएर ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको भेटिएको छ । उनले मन्त्रालयका उच्चशिक्षा महाशाखाका उपसचिव लक्ष्मीकुमार खड्कासँग आर्थिक लेनदेनमा ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।
आरोपित झा ठगी आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा पुर्पक्ष थुनामा छन् । उनलाई भदौ दोस्रो साता काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा पेस गरेको थियो । शिक्षकसमेत रहेका प्रवीणकुमार झाको उजुरीमा उनी पक्राउ गरेका हुन् । उनले प्रवीणकुमारसँग नयाँ कलेज दर्ता गर्न भनेर २०७४ अघि नै ५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । कलेज दर्ता हुन नसकेपछि सञ्चालनमै रहेको कलेजको सेयर दिने भनेर त्यसपछि थप रकम लिए । झाले त्यतिबेला आईसीएचएम नामको कलेज देखाएर सेयर रकम उठाएका थिए ।
प्रवीणसँग दुई करोड रुपैयाँ लिइसकेपछि उनले कलेजको नाम परिवर्तन गरेर केन्ट कलेज बनाए । त्यसपछि सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालय र कलेजको स्थानसमेत परिवर्तन गरियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मापदण्डबिनै कलेजलाई धरान सार्न अनुमति दिएका थिए । २०७४ पुस १३ गते उक्त कलेजको विश्वविद्यालय, नाम र स्थान परिवर्तन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले अनुमति दिएका हुन् । जबकि धरानमा कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, जग्गा, भवन नै थिएन । ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनका शिक्षण संस्था सञ्चालन निर्देशिका २०५९’ मा भने कलेजको स्थान परिवर्तन गर्नुअघि पूर्वाधारको अनिवार्य अनुगमन हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
धरानमा कलेज सञ्चालनको अनुमति पाएको प्रमाण देखाएर मनोज श्रेष्ठलगायत ३ जनाबाट सेयर दिने भन्दै एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाए । ‘मेरो दुई करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको थियो, मलाई नै थाहा नदिई काठमाडौंको कलेज धरान सारियो,’ प्रवीणले भने, ‘सेयर माग्दा कलेज चलाउने भए धरान जानू भनियो, धरानमा सम्पर्क गर्दा केन्ट कलेज हाम्रो हो, १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौं भन्ने साथीहरू पो भेटिए ।’ झा, कलेजका लेखा अधिकृत मुकेश महर्जन र केन्ट प्रालिका अध्यक्ष दीपकप्रसाद मिश्रलाई बैंकबाट रकम बुझाएको प्रवीणको भनाइ छ । ‘सञ्जय सरले कम्पनीहरूको सेयरधनी बनाइदिन्छु भनी मौखिक तथा इमेल संवादसमेतबाट विश्वास दिलाउनुभयो । तर आजको मितिसम्म न पैसा फिर्ता गर्नुभयो न सेयर नै दिनुभयो,’ प्रवीणले थपे, ‘मैले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गरेको हुँ, बैंकले जग्गा लिलाम गर्ने बेला भइसक्यो ।’
उनले महर्जन र मिश्रलाई समेत विपक्षी बनाएर ठगी मुद्दा दर्ता गराएका छन् । ठगीमा परेका मनोज श्रेष्ठले पनि झाविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउने तयारी भइरहेको जनाए । कान्तिपुरलाई प्राप्त करारनामामा धरानमा केन्ट कलेज सञ्चालन गर्न २०७५ साउनमै उनीहरूबीच सम्झौता भएको देखिन्छ । जसअनुसार श्रेष्ठ समूहले झालाई ३ किस्तामा रकम दिएको सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यतिबेलै शिक्षा मन्त्रालयमा कलेजको ठाउँसारीलगायतका लागि २० लाख रुपैयाँ राजस्व शुल्क बुझाउने सम्झौता गरिए पनि अहिलेसम्म कलेज धरान सारिएको छैन । बरु कलेजलाई पुनः काठमाडौं सार्न झाले २०७७ मा मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । ‘कलेजको सेयर पनि पाएनौं, लगानी पनि फिर्ता पाएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रवीणको मुद्दा किनारा लाग्नेबित्तिकै सञ्जयविरुद्ध ठगी मुद्दा हाल्छौं ।’
निर्देशिकामा मापदण्ड पूरा गरेर विश्वविद्यालय, नाम, स्थान र कार्यक्रम परिवर्तन (स्वीचिङ) गर्न पाइने व्यवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थी नै नभएको केन्ट कलेजले २०७१ यता प्रत्येक वर्ष जस्तो ‘स्वीचिङ’ गरेको देखिन्छ । यसरी अस्वाभाविक रूपमा कलेजको स्वीचिङ गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नै अनुमति दिएको बुझिन्छ ।
झाले प्रवीणलाई सेयर दिने भनेको ललितपुरको आईसीएचएम कलेज २०७१ सालसम्म मलेसियाको निलाई विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेको थियो । २०७३ सालमा मलेसियाकै लिंकन विश्वविद्यालयमा त्यसको सम्बन्धन सारियो । झाले २०७४ कात्तिकमा पुनः स्वीट्जरल्यान्डको ईएचई युरेका विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन परिवर्तन गर्न मन्त्रालयमा निवदेन दिए र तत्काल अनुमति पनि पाए । यसरी मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत एकैपटक एउटै कलेजलाई दुई फरक मितिमा दुईवटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनको अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
‘कलेजमा विद्यार्थी पढिरहेका हुन्छन्, यसरी स्थान, विश्वविद्यालय र कार्यक्रम परिवर्तन गर्दा विद्यार्थीको बिचल्ली हुने गरेको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘दर्ता गरेर झोलामा बोकेर हिँड्ने कलेजलाई खारेज गर्नुपर्ने हो, मन्त्री फेरिएपछि स्वीचिङ गरेर मनोमानी गर्न छुट दिइन्छ ।’ २०७५ यता भने केन्ट कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । २०७४ मा विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्दा उक्त कलेजका एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी अलपत्र परेका थिए ।
यसरी स्वीचिङ गर्नमा झाले उपसचिव
खड्कामार्फत आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको पीडितहरूको आरोप छ । केन्ट कलेजले २०७४ मा मन्त्रालयका लागि भनेर ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको सञ्चालकहरूले बताए । प्रवीणले पनि प्रहरीलाई दिएको जाहेरीमा ५ लाख रुपैयाँ बिल भर्पाईबिनै मन्त्रालयमा ‘खर्च’ गरेको उल्लेख गरेका छन् । कलेजको नामसारी, ठाउँसारीलगायत स्वीचिङका लागि २० लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । झाले भने पटकपटक कलेज स्वीचिङ गराउँदा मन्त्रालयमा राजस्व शुल्क बुझाएको तथ्यांक भेटिँदैन ।
उपसचिव खड्काले पुरानो कुरा आफूलाई जानकारी नभएको र हाल कलेज पनि बन्द अवस्थामा रहेको प्रतिक्रिया दिए । जबकि कान्तिपुरले प्राप्त गरेको कागजातमा २०७४ पुस १३ मा उनले नै कलेजलाई स्वीचिङ गर्न पत्र दिएको देखिन्छ । त्यतिबेला उनी उच्चशिक्षा शाखाको जिम्मेवारीमा थिए । २०७७ फागुनदेखि उनी तेस्रो पटक उक्त शाखाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् ।
पुस १३ गते मन्त्रालयले एउटै चलानी नम्बरमा दुई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर आईसीएचएम (केन्ट) कलेजको स्वीचिङ भएकाले २० लाख राजस्व जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले लेखेको एउटा पत्रमा कलेजको विश्वविद्यालय, कार्यक्रम, स्थान परिवर्तन खुलाइएको थियो । अर्कोमा भने विश्वविद्यालय, कार्यक्रम र स्थान परिवर्तन गरिएको उल्लेख भए पनि कसरी भयो भन्ने खुलाइएको थिएन । त्यसरी दुईवटा पत्र लेख्नुका पछाडि झा र
खड्काबीच साँठगाँठ रहेको पीडितहरू बताउँछन् । उनीहरूको भनाइमा झाले ललितपुरमा रहेको कलेजलाई बानेश्वर सार्ने भनेर प्रवीणसँग पैसा लिएका थिए तर गोप्य रूपमा कलेज धरान सार्ने भनेर श्रेष्ठ समूहसँग पनि पैसा उठाए । प्रवीणलाई उनले कलेज बानेश्वर सार्ने बताएका थिए । प्रवीण र श्रेष्ठ समूहसँग दुई फरक ठाउँमा कलेज सार्ने भनेर ‘डिल’ गरेको हुँदा उनले खड्कासँगको मिलेमतोमा दुईवटा भिन्नाभिन्नै पत्र जारी गर्न लगाएको देखिन्छ । ‘मन्त्रालयले स्वीचिङ गर्ने निर्णय गरेपछि मैले चिठी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला म त्यो शाखाको जिम्मेवारीमा थिइनँ, अर्को साथी नभएकाले मैले चिठी तयार पारेको हो, अरू मलाई थाहा भएन ।’
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०७:२६
ललितपुर प्याट्रियट्सको ब्याटिङको अन्तिम ओभरमा शाहिद अफ्रिदीले लङअफमा नारायण जोशीको क्याच लिएका थिए, विकेट भने लिएनन्
आश्विन १०, २०७८ विनोद पाण्डे
काठमाडौँ — प्रायः सबैको नजर काठमाडौं किंग्स इलेभेनका शाहिद अफ्रिदीमा थियो । उनी बजाज पल्सर एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) मा शनिबार साबिक विजेता ललितपुर प्याट्रियट्सविरुद्ध उत्रिएका थिए । नेपालमा आएर खेल्ने खेलाडी सूचीमा पाकिस्तानी भेट्रान अलराउन्डर अफ्रिदी सबैभन्दा ठूलो नाम थिए ।
त्यसैले हुनसक्छ उनको खेल हेर्न कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा बाक्लै दर्शक उपस्थित थिए । ‘बुम बुम अफ्रिदी’ भन्दै दर्शक चिच्याइरहे । बलिङ त गरे, त्यो उनले नै सम्झने खालको थिएन । उनले ४ ओभरमा ३२ रन खर्चेका थिए, बदलामा कुनै विकेट थिएन ।
ललितपुरको ब्याटिङको अन्तिम ओभरमा उनले लङअफमा नारायण जोशीको क्याच लिन पुगे । ब्याटिङमा मौका नै नआएकाले अफ्रिदी खाली हात भएनन् । खेलपछि उनी जालीबाहिर रहेका दर्शकसँग ‘हाइ फाइभ’ गरिरहेका थिए । काठमाडौं किंग्सले ललितपुरविरुद्ध ७ विकेटको विजय हात पार्दा अफ्रिदीको प्रत्यक्ष खासै ठूलो भूमिका नदेखिए पनि दर्शक उनको उपस्थितिमै दंग थिए ।
‘स्पिनरका लागि आज त्यति सजिलो थिएन, बल ग्रिप गर्न गाह्रो परिरहेको थियो,’ ४ ओभरमा ४४ रन खर्चेका काठमाडौं किंग्सका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफ्नो र अफ्रिदीको बचाउ गर्दै भने, ‘मैले विकेट नलिए पनि मेरो टिमले जितेको छ, मेरो प्राथमिकता पनि यही हो । अफ्रिदी टिममै हुँदा मात्र पनि ठूलो फरक पर्छ । उनले क्रिकेट मैदानमा यत्रो वर्ष बिताएका छन्, त्यो अनुभव नै हामीले पाउँदा फरक परिहाल्छ ।’
चम्किए गुरबाज र बर्ल
अफ्रिदी नचम्किए पनि काठमाडौं किंग्सका अर्का दुई विदेशी खेलाडी रहमानुल्लाह गुरबाज र रायन बर्लले आक्रामक इनिङ्स खेले । अफगानिस्तानका गुरबाजले ३६ बलमा ५९ र र जिम्बावेका बर्लले ३४ बलमा अविजित ७३ रन बनाएपछि काठमाडौं किंग्सले १ सय ५८ रनको लक्ष्य सजिलै १५ ओभरभित्र १ सय ६० रन बनाउँदै पूरा गर्‍यो । बर्लले ३ चौका र ७ छक्का प्रहार गरी अविजित रहे । अर्का अविजित ब्याटर राजु रिजालले १३ बलमा २ चौकासहित १९ रन बनाए । सुवास खकुरेल आफूले सामना गरेको पहिलो
बल र अमित श्रेष्ठ ४ रनमा रनआउट भए पनि गुरबाज र बर्ल ललितपुरका बलरमाथि हाबी भएर तेस्रो विकेटमा ७६ रनको साझेदारी गरे । गुरबाजले ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । उनलाई पवन सर्राफले स्टम्पआउट गराए ।
टिमलाई राम्रोसँग संगठित गरेका कप्तान सन्दीपलाई धन्यवाद दिँदै बर्लले आफ्नो इनिङ्सबारेमा भने, ‘जब मैले देब्रेहाते बलर देखें, स्ट्राइकमा रहेका साथीलाई मलाई स्ट्राइक दिन भने । कहिले यो सफल हुन्छ, कहिल्यै हुँदैन, आज भयो ।’ दर्शकको समर्थनले पनि आफूहरूलाई राम्रो खेल्न उर्जा दिएको उनले सुनाए ।
घरेलु क्रिकेटका सर्वाधिक सफल बलर देव्रेहाते ललित राजवंशीलाई २७ वर्षे बर्लले १२ औं ओभरमा ४ छक्का र १ चौका प्रहार गरे । काठमाडौं किंग्सको पाँचौं ओभरमा गुरबाजले ललितलाई तीन छक्का प्रहार गरेका थिए । ललितले २ ओभरमै ४८ रन खर्चन पुगे । गुरबाजले २४ बलमा र बर्लले २७ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका थिए । गुरबाजले दुईपल्ट जीवनदान पाए । ५३ र ५५ रनमा छँदा उनको क्याच योगेन्द्रसिंह कार्कीले छाड्न पुगे । दुवै पटक अभागी बलर साबित भए पवन ।
बर्लले राजु रिजालसँग चौथो विकेटमा २५ बलमै अविजित ७२ रनको साझेदारी गरे । राजुले १३ बलमा २ चौकासहित अविजित १९ रन बनाए । ‘टसको क्रममै मैले १ सय ५० छेउछाउको स्कोर पछ्याउन सकिन्छ भनेको थिएँ, किनभने हामीले यो विकेटमा खेल्दै पनि आएका छौं,’ ईपीएलमा पहिलो पटक कप्तानी गरिरहेका सन्दीपले भने, ‘राजुले पनि स्ट्राइक दिँदै राम्रो खेले ।’
जितेन्द्रको बल र पवनको ब्याट
यसअघि पवन सर्राफको अर्धशतकमा टस हारेर ब्याटिङमा आएको ललितपुरले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाई रन १ सय ५७ बनाएको थियो । जितेन्द्र मुखियाले पहिलो ओभरमै २ विकेट लिएको स्थितिमा सम्भवतः ललितपुरले यो स्कोर कल्पना गरेको थिएन ।
४० बलमा अर्धशतक बनाएका पवनले कुल ४४ बल खेल्दै ५ चौका र चार छक्का प्रहार गर्दै ६१ रन बनाए । ललितपुरको सुरुआत निकै दयनीय भएको थियो । जितेन्द्रले पहिलो बलमै ललितपुरका कप्तान कुशल भुर्तेललाई आउट गरेका थिए भने ओभरको अन्तिम बलमा सेन्डोन विराकोडीलाई २ रनमा आउट गरी काठमाडौंलाई निकै उत्कृष्ट सुरुआत दिलाए । कुशलले लेग स्टम्पतिर गएको बल हावामा उडाउन पुगेका थिए ।
शंकर रानाले २७ बलमा १४ रनमात्र बनाए पनि उनले पवनलाई राम्रो साथ दिए । पवनले त्यसपछि योगेन्द्रसिंह कार्कीसँग अर्को राम्रो साझेदारी गरे । योगेन्द्रले २० बलमा तीन छक्कासहित ३३ रन बनाए । पवन र योगेन्द्रलाई बर्लले लगातार बलमा आउट गरे । राशिद खान १ रनमै आउट भए । ईपीएल खेल्ने पहिलो भुटानी खेलाडी बनेका मिक्यो दोर्जी १३ बलमा १ चौका र १ छक्का प्रहार गरी १७ रन बनाई अविजित रहे । नारायण जोशी ४ बलमा १२ रन बनाई अन्तिम ओभरमा आउट भए । जितेन्द्रले ४ ओभरमा १८ रनमात्र खर्चेर ४ विकेट लिए । बर्लले ४ ओभरमा २० रन खर्चेर २ विकेट लिए । गुलशन झाले ४ ओभरमा ३५ रन खर्चेर २ विकेट लिए ।
आफ्नो टोलीले सोचेभन्दा २०–३० रन कम बनाएको कुशलले बताए । ‘हाम्रो टिममा बलिङ राम्रै छ, तर आज केही मिलेन, सोचेजस्तो बलिङ भएन । ललितपुर साबिक विजेता हो, फाइनल खेल्ने नै अपेक्षा गरेका छौं, पहिलो खेल हारे पनि हामीसँग चार खेल बाँकी छ, त्यसमा राम्रो खेल्ने प्रयास गर्नेछौं,’ नियमित कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तिम समयमा ईपीएल नखेल्ने निर्णय गरेपछि टिमको नेतृत्व गरिरहेका कुशलले भने ।
प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०७:२१
एमालेमा नयाँ दृश्य : वडा अधिवेशनमा सर्वसम्मतिको संकेत के हो ?
गैंडाको खागसहित २ पक्राउ
बेल्जियममा काम लगाइदिन्छु भन्दै बेचविखन गर्ने फरार अभियुक्त पक्राउ
बागलुङमा औलो !
विपत्तिमा परेकाहरुलाई जोगाउनु सरकारको प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री देउवा
बेल्जियममा काम दिलाउने भन्दै बैंकक पुर्‍याउने पक्राउ